अवार्डमुखी वर्षा ! – Pokhara Voice
अवार्डमुखी वर्षा !
By पोखरा भ्वाइस	 On १९ मंसिर २०७६, बिहीबार ०३:३१
२०७६ मसिर १९ गते
अघिल्ला वर्षझैँ यस वर्ष पनि फिल्म अवार्डको मौसम सुरु भैसकेको छ । देश तथा विदेशमा अहिले भकाभक अवार्ड आयोजना भैरहेका छन् । तर, विवादबाट कुनै मुक्त छैनन् । आजभोली फिल्म अवार्ड यतिसम्म लाजमर्दो हुन थालेको छ कि ‘सह-अभिनेता’ लाई ‘उत्कृष्ट अभिनेता’ को अवार्ड थमाइन्छ । कथा, पटकथा र प्रस्तुती केही गतिलो नभएको फिल्म ‘उत्कृष्ट फिल्म’ घोषित हुन्छ ।
नेपाली फिल्मकर्मीहरु पनि एउटा ट्रफी र खादाको लोभमा आफ्नो धरातल विर्सन्छन् । अवार्ड पाउने भएपछि होटलको बारदेखि दर्शकदीर्घामा दर्शक नै नभए पनि गर्वका साथ अवार्ड उचाल्न हिचकिचाउँदैनन् । अवार्ड पाएकोमा अन्तरआत्मा खुसी नहोला, तर सामाजिक सञ्जालमा बधाई खान पाउँदा आफूलाई सर्वश्रेष्ठ ठान्दछन् । जुन आत्मरतीमा रमाउनु बाहेक अरु केही होइन ।
राम्रो कामको मुल्यांकन गरेर भविष्यका लागि प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान गरिनु पर्ने अवार्ड आजभोली गाई ब्राखाजस्तो खुल्लेआम बिक्री भैरहेका छन् । र, त्यही अवार्ड गर्वका साथ उचालेको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा राखेर बधाई खान हानाथाप गर्छन्, नेपाली सेलिब्रेटी । पछिल्लो केही वर्षयता धेरैलाई अवार्ड भनेको विदेश जानका लागि दूतावासमा देखाइने सिर्फ वस्तु भएको छ ।
खैर, आजको सन्दर्भतर्फ नै लागौं । यो प्याकेजमा हामी कुशल अभिनय गर्ने अभिनेत्रीको रुपमा चिनिएकी वर्षा राउतको कुरा गर्दैछौं । कलाकारको भीडभाड रहेको फिल्म गरेरै आफूलाई अभिनेत्रीको रुपमा स्थापित गरेकी उनी अवार्ड भनेपछि मरिहत्ते गर्छिन् । पछिल्ला दुई उदाहरणले उनको अवार्डप्रतिको मोह छर्लङ्ग पार्छ । एक हो- जापानमा भएको ‘सूर्य इन्टरनेशल अवार्ड’ ।
त्यहाँ उनले फिल्म ‘गोपी’ बाट सह-अभिनेत्रीको अवार्ड जितिन् । तर, अवार्ड कार्यक्रममा दुई दर्जन दर्शक पनि उपस्थित थिइन् । दर्शकभन्दा नेपालबाट गएका अतिथी धेरै थिए । लिने र दिने मात्र भएको कार्यक्रममा वर्षाले खाली कुर्सीलाई साक्षी राखेर गर्वका साथ सुपरफ्लप फिल्मबाट पाएको अवार्ड उचालिन् । ‘गोपी’ मा उनको अभिनयको प्रशंसा भएको थिएन, तर अवार्ड पाइन् ।
जापानपछि उनी उतैबाट ‘ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड’ मा सहभागी हुन अमेरिका हानिइन् । आइतबार भएको अवार्ड कार्यक्रममा उनलाई जुरीतर्फबाट सम्मान गरिएको थियो । अवार्ड थाप्नुभन्दा अगाडि उनले कार्यक्रममा नृत्य प्रस्तुत गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा प्रस्तुती दिएपछि अवार्ड नपाउने कुरै आएन ! तर, वर्षाले अवार्ड पाएको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट्याएकी छैनन् ।
फिल्म ‘जात्रै जात्रा’ को सफलतापछि कुनै नयाँ फिल्म साइन नगरेकी उनलाई अहिले अवार्ड थाप्न भ्याइनभ्याइ छ । त्यो पनि विदेशमा । जहाँ गयो त्यही अवार्ड हात पार्ने गरेकी वर्षालाई यतिबेला अवार्डमुखी भएको आरोप लाग्न थालेको छ । यो आरोपबारे वर्षाको जवाफ के आउला ? धेरैका लागि चासोको विषय बनेको छ । ‘दिनेले दिए, मैले लिएँ’ भन्ने जवाफ त आउने होइन ?
जनवरी २७ मा प्रेमी सुरजसँग विवाह गर्दै मौनी